China Hydraulic Guillotine ညှပ်စက်စက်နှင့်ထုတ်လုပ်သူများ မင်းရဲကျော်စွာ
ဟိုက်ဒရောလစ် Guillotine ညှပ်စက်
ဗို့အား:380V / 3Phase / 50Hz ဒါမှမဟုတ်သင့်တောင်းဆိုချက်အရ
ပုံစံမြန်နှုန်း:8-10m / min
အသေးစားမှာယူမှုကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်စျေးကောင်းရှိသည်။ * ၎င်းကိုဟိုက်ဒရောလစ်မောင်းနှင်မှုကိုလက်ခံသည်။ ဘောင်တွင်သံမဏိကိုယ်ထည်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီးလုံလောက်သောခွန်အားနှင့်မာကျောမှုရှိသည်။ * စက်တွင် whicn တွင် power back gauge၊ လက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်ရသည့်ကောင်းမွန်သောညှိနှိုင်းမှု၊ ဓါးသွားရှင်းလင်းရေးအတွက်ယန္တရား၊ ဖြတ်တောက်သည့် operatikon ကိုလောင်ကျွမ်းနေသော ashadw light device၊ ချိတ်ဆက်စက်တစ်ခု၊ ထိခိုက်လွယ်သောလုံခြုံစိတ်ချရသောအတားအဆီးဖြစ်သည်။ * ၎င်းကိုထောက်ပံ့သောသယ်ဆောင်စက်နှင့်လည်းတပ်ဆင်နိုင်သည်။ * သံမဏိသံမဏိကိုယ်ထည်အပြည့်နှင့်ခိုင်ခံ့မှု၊ * ဟိုက်ဒရောလစ်အထက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောဘားနှင့်အတူဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်းကိရိယာ။ * လျင်မြန်စွာဖြတ်တောက်ခြင်းလေဖြတ်ချိန်ညှိခြင်းကိုမွေးစားသည်အတိုစာရွက်ဖြတ်တောက်သည့်အခါထိရောက်မှုတိုး။
* Back-gauge ဘူတာသည်ကောင်းမွန်သောလက်စွဲညှိနှိုင်းမှုနှင့်အတူမော်တာဖြင့်မောင်းနှင်သည့်အတိုင်းအတာကိုလက်ခံသည်။ ကောင်တာကိရိယာဖြတ်တောက်။ * အလင်းလိုင်းကိရိယာဖြစ်သောကြောင့်ဖြတ်တောက်ရန်လိုင်းဆွဲရန်လွယ်ကူသည်
၁။ အထူ ၃ မီလီမီတာမှ ၂၀ မီလီမီတာ
2. မက်စ်အရှည်: 12‐15M
၃။ မက်စ်ဖြတ်စက်အကျယ် - ၉၀၀-၁၂၀၀ မီလီမီတာ ဖြတ် 4. အမြန်နှုန်း: 8 :10m / min ၅ ။ အဓိကစွမ်းအား - ၃၀ ကီလိုဝပ် (၂၀ မီလီမီတာ) 20Kw (18mm) 15Kw (12mm) 6. Moving မော်တာ: 5.5Kw 7. ဖြတ်တောက်ခြင်းထောင့်များ: 0.5‐3 ° ပလက်ဖောင်း၏ 8 အမြင့်: 1030mm ၉။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတိုင်းအတာ - ၁၀၀ ㎡ ပစ္စည်း၏အရှည်ကိုထိန်းချုပ်ရန် 10. Servo မော်တာ၊3pcs PLC ညှိနှိုင်းထိန်းချုပ်မှု အမှတ်တံဆိပ်လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ:
1. ထိတွေ့မျက်နှာပြင်: မြစ်ဝကျွန်းပေါ်
2. PLC မြစ်ဝကျွန်းပေါ်
3. Relay: schneider 4. တိုက်နယ်အနိုင်အထက် Chint 5. ကုဒ်: omron 6. အောက်ခြေ schneider 7. တီထွင်သူ Shihlin
စံပြရှာဖွေနေသည် ဟိုက်ဒရောလစ်ညှပ်စက်ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း? သင်၏ဖန်တီးမှုကိုကူညီရန်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ အရာအားလုံးGuillotine ညှပ်စက်အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတရုတ်မူလအစစက်ရုံဖြတ်တောက်ခြင်းစက်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသောစက်ရုံ။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။
လွှဲ Beam ကိုညှပ်စက်
Ridge ဦး ထုပ် tile လိပ်ရောင်းရန်စက်
က c purlin ခေါင်မိုးဒီဇိုင်းလိပ်ဖွဲ့စည်းစက်
Z28-250 Threading စက်
CE အသိအမှတ်ပြုနှစ်လွှာအလွှာအအေးလိပ်ဖွဲ့စည်း ...
ခေါင်မိုး Tile ကိုသတ္တုပြားကိုဖွဲ့စည်းစက်